သက်ဝေ: ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀
Anonymous June 2, 2010 at 9:42 PM
blueskyforest June 2, 2010 at 9:52 PM
သက်ဝေက ဘော်လုံးကျွမ်းသူပါတကား။ ဘော်လုံးကျမ်း ထုတ်ဖို့အကြံပြု ပါရစေ။ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ဘော်လုံးမှာ ခြေစွမ်းထက်ဆိုပဲ။ မြောက်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးအသင်းကလည်း အာရှမှာ ထိပ်ဆိုပဲ။ ဘော်လုံးအကြောင်းအရေးသန်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးဘလော်ဂါတွေထဲမှာ သက်ဝေက ထိပ်ပဲလား။ စောင့်ကြည့်နေပါမည်။
ပြောသားပဲ မိန်းမ ဘောလုံးအသင်းခေါင်းဆောင်လုပ်ပါဆိုနေ
P.Ti June 2, 2010 at 9:57 PM
အမ တယောက်ထဲကြည့်ရမှာပျင်းစရာကြီး. အလည်လာမယ်နော်. :P
ကိုဇော် June 2, 2010 at 10:20 PM
ဟီးဟီး. . .ဝါသနာတူတွေတော့ တွေ့နေပြီ။
ကျနော်ကတော့ နက်ထဲကနေပဲ ကြည့်တော့မယ်။
အလကားလေ. . ။ SONY LCD ရှိရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ တွဲကြည့်လို့ရတယ် အမ။ ဘယ်အသင်းတွေ ဘယ်လို ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အားရင် လာလာအော်မယ်။
ဟေး ဟေး ဟေး တွေးတာနဲ့တောင်မှ ပျော်စရာကြီး။
Ronaldinho ကို သူ့ရဲ့  ရှေ့သွားနှစ်ချောင်း လေး နဲ့ အမြဲတမ်း ပြုံး နေတတ်လို့ ချစ်တယ် ... အင်္ဂလန် က Rooney ကိုတော့ မိုက်ရိုင်း လို့ မကြိုက် ဖူး ...
ကိုအောင် June 2, 2010 at 10:48 PM
ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ် အမ၊ အမ ခန့်မှန်းသလို ဖြစ်လာခဲ့
ရင် စင်္ကာပူအလည်လာတဲ့အခါ မုန့်ဝယ်ကျွေးပါ့မယ် အမ၊ Tag ဂိမ်းကို
အခုလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရေးပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီး
sosegado June 2, 2010 at 11:00 PM
သတိလည်းထားဦး Singtel Mio TV က live ဆိုရင်ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ရပ်ရပ်သွားတယ်၊ upgradeလုပ် နေတာလို့ပြောတာပဲ၊ Ronaldinho မပါတော့ဘူး၊
ရွှေရတုမှတ်တမ်း June 2, 2010 at 11:00 PM
ကိုင်း... အကြိုက်ကတော့ ၅၀-၅၀ ပဲ၊ မယ်သက်ကို ဗမာအမျိုးသမီးဘောလုံးသင်းမှာ မန်နေဂျာခန့်ဖို့ အကြံပေးအုန်းမှ..
Ko Boyz June 2, 2010 at 11:25 PM
why no beckham and Owen.
I want Owen in the team.
ကလူသစ် June 3, 2010 at 12:03 AM
ပုံစံကြည့်ရတာတော့ ဘောလုံးပွဲထက် ဘောသမားကြည့်မဲ့သဘောရှိတယ် :P
ဂျူနို June 3, 2010 at 4:06 AM
နိုးစက်ပေးပြီး ထကြည့်မယ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရား ဒါမျိုးတော့ ဘာအတွက်ကိုမှ တခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး။ တော်ပါသေးရဲ့ အိမ်နီးချင်း မဟုတ်လို့ တအိမ်ထဲ အတူနေတာ မဟုတ်လို့ :))))
Anonymous June 3, 2010 at 5:10 AM
Maung Myo June 3, 2010 at 5:25 AM
အင်္ဂလန် ပရိသတ်ချင်းတူ သွားပြီး အစ်မသက်ဝေရေ့ ရှဲရှဲး)
ပူးတေ June 3, 2010 at 9:30 AM
မမရေးထားတာ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းနေတယ်... ဖတ်လို့ကောင်းတယ်... သဘောကျမိတယ်....ညီမကတော့ ဘောလုံးဆိုတာ ကျောင်းတုန်းက ကိုယ့်မေဂျာကလူတွေ ကန်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေအကြောင်းပဲသိတယ်... ကျန်တာတွေ ဘာမှမသိဘူး.. ကျောင်းကဘောလုံးပွဲတွေမှာ တခြားအသင်းတွေနဲ့ ရန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတာ မှတ်မိသေးတယ်... စတီးချိုင့်ကြီးတွေဆွဲလို့...:D
စုချစ် June 3, 2010 at 10:23 AM
အစ်မသက်ဝေက စွယ်စုံတော့... ဘောလုံးပွဲအကြောင်းလဲ သေချာသိတာတော့...
သူများတော့ ဘာမှ သိဘူးတော့...
အိမ်က အစ်မသယ်ရင်းတော့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စတားဟပ်ကနေ လိုင်းယူလိုက်ပီ... ခုတော့ ဘယ်သူ့အဖေါ်ခေါ်ရမလဲ စဉ်းစားနေလေရဲ့...
Unknown June 3, 2010 at 11:29 AM
how can i see online?
ချစ်ကြည်အေး June 3, 2010 at 12:07 PM
အင်း စားရေရိက္ခာ အပြည့်အစုံနဲ့ ဘောလုံးသမားတွေ ကြည့်တော့မယ်ပေါ့လေ....ခန့်မှန်းထားတဲ့ အသင်းတွေ နိူင်မနိူင်တော့ မသိဘူး၊ ရှေ့ဆုံးတန်းကနေ မယ်သက်တို့ သားရေကျမှာတော့ ကျိန်းသေပဲ ခွိ ခွိ :)
Moe Cho Thinn June 3, 2010 at 2:20 PM
နိုင်မဲ့အသင်းက ဘယ်အသင်းလဲ မေးရင် သူ့ အင်္ဂလန်ချည်း ဖြေနေလို့..
ဖြူ June 3, 2010 at 10:29 PM
ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့ အားကြိုးမာန်တက်ရှိနေတာ ဖတ်ရတာ ချစ်ဖို့ကောင်းပါဘိ.... တို့လဲ အင်္ဂလန်အသင်းကိုကြိုက်တယ်...
ဘောလုံးပွဲရက်တွေမှာ အနိုင် အရှုံး လာအော်မယ်နော်...
အမရေ.. မအားလို့ အခြားပွဲတွေ ကြည့်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ အမရေ..သတင်းလေးတော့ပေးပါ။ အမ အုပ်စုပွဲတွေ ဘယ်သူနိုင်ပီး ဘယ်သူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာ နော်..အမ။ ဆီမီးနဲ့ ဖိုင်နယ်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။
Anonymous June 3, 2010 at 10:36 PM
အမ ..အင်္ဂလန်က အိုဝင်မပါတော့ အင်္ဂလန်ကို အားနားပါးနာ အားပေးစရာလိုတော့ဘူး။
Anonymous December 7, 2013 at 11:56 PM
Alpha-5 မှ အကြံဥာဏ်ပေးချင် ပါသည်။ဒီနှစ် ဖလားလည်း စပိန်ကျိန်းသေရမှာပဲ မယုံရင် လောင်းလို့ရတယ် ph:31352532 viber မှ welcome...
Hmoo June 4, 2010 at 5:05 AM
May Moe June 5, 2010 at 1:07 PM
ဟားဟား တူတူပဲ မန်ယူ & အင်ဂလန် ပရိတ်သတ် :D
pandora June 5, 2010 at 4:37 PM
လိုင်းလည်းဝယ်မထား ကြည့်ဖြစ်မှာလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် တက်ဂ်ပို့စ် မရေးတော့ပဲ ဘေးထိုး လေးပဲ ထိုးလိုက်ပါတယ်။ မသက်ဝေအတိုင်းပဲ လိုက်မှန်းပါတယ်။ ကိုအောင်ကိုလည်း ပြောထားတယ် မှန်လို့ ဆရာမ ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပန်ဒိုရာကို ဆရာ ဆိုတဲ့အပိုင်းခေါ်ပြီး မသက်ဝေကို မ ဆိုတဲ့အပိုင်း ခေါ်လိုက်ပါ .. လို့ :)
ဇွန်မိုးစက် June 7, 2010 at 4:53 PM
အီတလီနဲ့ အင်္ဂလန် ... ဘယ်အသင်းရရ ကျေနပ်မယ်း)
kaungkinpyar June 13, 2010 at 1:27 PM
အိမ်မှာ ချိန်းကြည့်ရအောင် ..စားစရာ မျိုးစုံ ကျွေးမယ် လေ..း)